अब के होला भारतको हालत ? पाकिस्तान युद्धको अन्तिम तयारी गरिरहेको भारतको आरोप ! [सीमामा तैथान भए यस्ता हतियार] – PanchKhal Online
Home/समाचार/अब के होला भारतको हालत ? पाकिस्तान युद्धको अन्तिम तयारी गरिरहेको भारतको आरोप ! [सीमामा तैथान भए यस्ता हतियार]
अब के होला भारतको हालत ? पाकिस्तान युद्धको अन्तिम तयारी गरिरहेको भारतको आरोप ! [सीमामा तैथान भए यस्ता हतियार]
काठमाडौं । जम्मू–कश्मीरमा धारा ३७० हटाएपछि पाकिस्तान लगातार विरोध जनाउँदै आइरहेको छ । भारतले एकतर्फि रुपमा धारा हटाउन खोजेको भन्दै पाकिस्तान लगातार भारत विरुद्ध एकपछि अर्को कदम उठाउँदै आइरहेको छ । विशेष श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार पाकिस्तान भारत विरुद्ध अन्तिम युद्धको तयारी गरिरहेको छ । पाकिस्तानले लद्दाखको स्कर्दूमा लड़ाकू विमान तैनाथ गरिरहेको खुल्न आएको छ ।
शनिवार पाकिस्तानले सीमाक्षेत्रमा तीन सी–१३० ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट पठाएको खुल्न आएको छ । यसमा फाइटर एयरक्राफ्टका उपकरण ल्याइएको थियो । जेएफ–१७ फाइटर जेटको पनि स्कर्दू एयरफील्डमा तैनाथ गर्न सकिन्छ । भारत सरकारले दिएको जानकारी अनुसार भारत पाकिस्तानले थालेको सबै खालको कुराहरुमा ध्यान दिइरहेको छ ।
खुफिया विभागले वायुसेना र सेनालाई पाकिस्तानको यस कदमबारे जानकारी दिएको छ । स्कर्दू पाकिस्तानको एक फरवार्ड अपरेटिंग बेस हो । पाकिस्तान यसको प्रयोग सीमाक्षेत्रमा आर्मी अपरेशनलाई सहयोग पर्याउनको लागि गर्दै आइरहेको छ । विशेष सुत्रका अनुसार पाक वायुसेना यहाँ अभ्यास गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यस कारण विमान स्कर्दूमा शिफ्ट गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् ।
थारुले उठाए आवाज : ‘१७ हजार मान्छे मार्ने प्रचण्ड–बाबुरामलाई जेल हाल्नुपर्छ’
गोयल कम्पनीको खातामा जम्मा गर्न लगिएको रकम लुटिएको नाटक गर्ने एक जना भारतीय नागरिकलाई १६ लाख नगदसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
विदेशी विनिमयदर, आज कुन देशको कति छ ? हेर्नुहोस् …